Best Web Awards » ကဗျာချစ်သူ များ ၏ ကဗျာပြခန်း အမှတ် (၃)	161
ပြခန်း (၁) http://mandalaygazette.com/176843
၃ ဇွန် ၁၃ ကေဇီ – ဟင်း:::::::::
ကေဇီ – စိတ်ပူနေတာလေ။ သဂျား – ဘာကိုတုန်း။
ကေဇီ – ဟုတ်တယ် လေ။ နင်တို့၂ ယောက်က ပြခန်း (၁) နဲ့ (၂) ကို စိတ်ဝင်စားအောင်ကောင်း ကောင်းဖန်တီးသွားနိုင်တော့ ကျုပ် ရေးရမဲ့ ပြခန်း (၃) အတွက် စိတ်ပူတာပေါ့လို့။ အင့် အင့် (ရှိုက်သံ ခရက်ဒစ်တူ ကိုကမ်း)။ အလက်ဆင်း – ဟင်။ မမခိုင် ဘာလို့ ငို တုန်း၊ သဂျား နင် သွား ဆူ ထားပြန်ပြီလား။
ကေဇီ – ဘာ! နေကြပေါ့။ ကြည့်ထား။ ကဗျာရော၊ ဓာတ်ပုံရော နင် တို့ အပြောမခံရအောင် တစ်ယောက်တည်း လုပ်မဟဲ့။ ဤသို့ ကျိန်းဝါးပြီး သကာလ ကေဇီ တစ်ယောက် ကဗျာ ရှာပုံတော်ဖွင့်ရပြီပေါ့။ ။ လက်ထဲမှာက အလင်းဆက် ရဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပဲ ရှိသေးတာ၊။ ဓာတ်ပုံ စပယ်ရှယ် ရှာပြီး တွဲပေးမယ် လို့ မက်လုံးပေးပြီး သူ့ ပြခန်း (၂) မှ ချန်ခိုင်းထားသော ကဗျာတစ်ပုဒ် ပေါ့။ ဟိဟိ…
ကိုယ်တိုင်က နည်းပညာရော အနုပညာပါ အားနည်းသော်လည်း မည်သို့ မည်ပုံရောက်လာမိသည်မသိသော အလက်ဆင်းတို့ရဲ့ “”ကဗျာချစ်သူများ”” ရုံးခန်းတွင်း မှာ ထိုင်ပြီး ခေါင်းပူအောင် စဉ်းစားရတော့တာပေါ့လေ။ ကိုယ်တိုင်စီစဉ်ရတဲ့ ဒီ ပြခန်း အတွက်နောက် နောက်ခေါက်ပြခန်းတွေမှာ ကဗျာ ပေးဖို့ မသေချာသောသူများဆီက ဓားမြတိုက်ဖို့ စိတ်ကူး အရင်ရ ပါတယ်။
“ဟဲ့ ရှူး ရှူး။ ဒီ ကြောင် ဖက်တီးဟာ ငါ့ ငါးခြောက်ပြား ဆွဲသွားပြန်ပြီ” ကြားလိုက်ရသော ဘေးအိမ်မှ ထို အသံကြောင့် အကြံတစ်ချက်လင်းလက်….!!!!
ဟိ။ ဆရာ ထက်ဝေးကဗျာတစ်ပုဒ် .. ဟို ကလေး ၂ ယောက် မသိအောင် ခိုးထားတာ ရှိတယ်။ နောက် နှိပ်စက် စရာ ပစ်မှတ် က …….. အံစာတုံး
တွေ့လား၊ ညီမလေးက အဲလို လိမ္မာတာ။ နောက်တစ်ယောက်……. ရွှေကြည်
ကေဇီ – ဟီးဟီး။ ကျန်တယ်၊ ကျန်တယ်။ ပျော်စရာကြီး။ နောက် တစ်ယောက်ကတော့ ဒီ ရွာထဲမှာ မမ်ဘာ ဝင်ထားပြီး ကဗျာကို လူကြိုက်မများဘူး ဆိုကာ ပို့(စ) မတင်ဖြစ်ပဲ ဖတ်ပဲ ဖတ်သူ ၁ ဦး။
ကေဇီ – (ဟိုက်! သေပြီ။) အဲ။. ဒီလိုလေ။ပြခန်းအတွက်ပါ အမရယ်။ ကူညီပါဦး။ နေခြည် – ဟိုတခါ အလက်ဆင်းကို ပေးထားသေးတယ်လေ။
ကေဇီ – ဟုတ်။ (ခွိ။ ဟုတ်ပြီ) နောက်ခါ အပြင် ကဗျာ ထဲက ဘယ်သူ့ကို အပူကပ်ရမတုန်း စဉ်းစားကြည့်တော့…….
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရိုက်ကြတာဆိုတော့ ကိုယ်သုံးမဲ့ ဓာတ်ပုံတွေမှာ ရေစာ ဖြုတ်စေလိုကြောင်း ဟိုလိုလေး ပြောလိုက် ဒီလိုလေးပြောလိုက်နဲ့ အောင်မြင်စွာကြိုက်ရာယူသုံးခွင့်ရပါတော့တယ်။ မင်းဇာနည်၊
ကေဇီ – ဟေ။ ဟုတ်လား။ ငါ ဈာန် ကို ဘလက်မေးလုပ်မယ် ဆိုတာ နားစွန်နားဖျား ကြား ပြီး လာပို့တာ ဖြစ်ရမယ်။ ဒီ လူဂျီး နားမကောင်းလို့ အကုန် နားစွန်နားဖျား လိုက်ကြား နေတယ်ဆိုပဲ။ ကျန်း:::::::။ သူငယ်မ ကုသိုလ် ငါ့ ကုသိုလ်။ ကဗျာ တစ်ပုဒ် ရပြန်ပြီ။ ဤသို့ဖြင့် ကို ဘလက်ချောဆီမှ ကဗျာတစ်ပုဒ် စာရင်းထဲ ထည့်လိုက်ရပါတယ်။
လောဘတကြီး ကဗျာ စုဆောင်းနေတာ။ ကိုယ့် အလှည့်ကျ ၁၅ ပုဒ် မက ၁၆ ပုဒ် ဖြစ်ပြီ။ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ခေတ်ပေါ် အင်္ဂလိပ် + မြန်မာ (မြန်မာကဗျာ) စာအုပ်တွင် ကဗျာဆရာ (၄၂) ဦး၏ ကဗျာပေါင်း (၈၇) ပုဒ် ပါဝင်သည်။ ယင်းတို့မှာ ဗြိတိသျှကိုလိုနီခေတ်မှသည် ၁၉၇၈ ခုနှစ်အထိ ပေါ်ထွန်းခဲ့သော ကဗျာဆရာပေါင်းများစွာ၏ ကဗျာပေါင်းအမြောက်အများထဲမှ အချို့ကိုသာ ရွေးချယ်စုစည်းတင်ပြသော ကဗျာများဖြစ်ပါသည်။ ယင်းတို့ကို ဦးဝင်းဖေ က အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ အစအဆုံး ပြန်ဆိုပါသည်။ ယင်းတို့အနက် အချို့ကို ဦးဝင်းဖေသည် အင်္ဂလိပ် လုပ်သားပြည်သူ့နေ့စဉ်သတင်းစာ (Working People’s Daily) နှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေသော ရှေ့သို့ (Forward) စာစောင်တို့၌ ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ဖူးပါသည်။ ခေတ်ပေါ် အင်္ဂလိပ် + မြန်မာ (မြန်မာကဗျာ) စာအုပ်တွင် ပါရှိသော မြ၀တီပုံနှိပ်တိုက် အယ်ဒီတာချုပ်၏ အမှာစာမှ ကောက်နုတ်ချက်
ဒုတိယပြခန်း ဗုဒ်အများဆုံးကဗျာက “ချစ်ခြင်းကဗျာ” ဖြစ်ပြီး ရေးသူက “ကိုရင်စည်သူ” ပါ။ ဒါတွေ က ပြခန်း (၂) က ကဗျာတွေနဲ့ ရေးသူတွေ တွဲပြီး အသိပေးထားတာပါ။
ကြေငြာခ အဖြစ် ဗုဒ် အများဆုံးရသူနှစ်ဦးမှ တိုက်ပါတယ်တဲ့ခင်ဗျာ။ (ရေ ခဲ ရေ) ရွှီး:::::::
အကြိုက်ဆုံး ကဗျာ (၃) ပုဒ် ကို ရွေးပြီး ဗုဒ်နိုင်ပါတယ်ဗျာ။ ကဗျာပြခန်းမှာ.. ကဗျာလေးများ..ပါဝင် ပြသ ချင်တယ်ဆိုရင်တော့…. alinsett.art@gmail.com ကို.ကဗျာလေးများ..ပေးပို့နိုင်ပါတယ်..လို့ ။
ခရီးသည်ကြီး says: ကျုပ်ရွာထဲမှာ ဒုတ်​မိး ကျန်​ခဲ့လို့ပြန်​ယူတာဗျ
KZ says: ကျမ ဟာ ကို လူကြိုက်များကြတာကိုးးးးးး
ကဗျာ ကိုပြောတာ။ အချိန်ရရင်တော့ လာဗုဒ် ပါဦးရယ်။ ဗုဒ်တာ နည်းလို့ ကျုပ်ကို ပြောနေကြတယ်။ ကဗျာ က အလှည့်ကျ ပါမှာပါ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6551
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ကဗျာဂျစ်သူများ ခညားးးးး
(ကျုပ်ကတော့ ဗုတ်ပီးဒါးဆိုဒေါ့ ပလိုမိုးချင်း ရစေဖို့အတွက် နောက်အကောင့်တစ်ခုနဲ့ ဝင်လာဂဲ့မယ်) လဂါးနောက်တာ ….
KZ says: ဘယ်လို ပရိုမိုးရှင်းရမလဲ ဆိုတော့ကာ…………………………………… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12177
အလင်း ဆက် says: ဂဇက် ရွာ နဲ့ အဆက်ပြတ် နေသူတွေ
သတင်း တစ်ခု ချန် ခဲ့ပါ မယ်။ ကဗျာ ပြခန်း အတွက်
ပေးပို့ နိုင်ပါတယ် ။ ရောက် ရှိလာတဲ့ ကဗျာ များကို
ကြည်ဆောင်း says: ဂဇက်နဲ့ ဆက်သွယ်မှုဧရိယာပြင်ပရောက်နေတာ အတော်ကြာနေပြီ ..
KZ says: ဘယ်လောက်နောက်ကျနောက်ကျ မမေ့မလျော့ လာတာကို ကြည်ဆောင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဗုဒ်သွားတာကိုလည်း ထပ်ဆင့်ကျေးဇူးပါ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1317
amatmin says: နောက်ဆုံးပိတ်ရက်မှ လာဗုဒ်မလို့ပဲ…
ဒါနဲ့ ပရိုမိုးရှင်းပေးရင် နောက်နှစ်ပုဒ် ထပ်လာဗုဒ်ပါ့မယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
KZ says: အာ …..
ကလေးတွေက လျှောက်ပြောနေတာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 63
Nay Chi says: Vote ဖို့ဝင်လာတာ..။ ၀င်ပြီးမှ နာရီကြည့်လိုက်တော့ ရုံးဆင်းနေလို့ ညကျမှ ပြန်လာ Vote တော့မယ်လို့ လာပြောတာနော်..။ :P :P
KZ says: ပြန်လည်းလာဦးနော်။
လာနော်။ လာနော်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3716
လုံမလေးမွန်မွန် says: နော်လည်း ပရိုမိုးချင်းမယ်.. အခိ…
KZ says: ပရိုမိုးရှင်း နည်းတော့ မတူစေနဲ့နော် လုံမလေးးး
KZ says: တဂျားရေ….
အလင်း ဆက် says: သကြား..ကျား ယင်..အကျောင်း ပျံ ဘာ…
Mr. MarGa says: ဒါကလေး များ လာတာနဲ့တင်
KZ says: ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုတော့ နိုင်ပြီ။
တဂျားးး နာ့ ကို မဆူနဲ့တော့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1988
Shwe Ei says: ဗုတ်ရမဲ့လစ်စ်ထဲမှာ ကဗျာတွေ အကုန်မပါဝူးဖစ်နေသလားလို့…….???
KZ says: Poems of non-members were not put in vote list. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1988
Shwe Ei says: ဒီကလဲ နန်းမင်ဘာတေရဲ့ ပိုအမ်တေမှ ရွေးပီးဗုတ်ချင်နေတာ….ဖစ်ပုံ တိုက်ဆိုင်လိုက်တာများကွာ……….ဂျွန်၂၆ရက်..ဆိုးချက်ကရင်နင့်စရာ………ေိေိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ငိငိ Was this answer helpful?LikeDislike 4718
padonmar says: မယ်ဆွိလက်ရာက ထုံးစံအတိုင်း သွက်လက်နေတော့
KZ says: အာတီဒုံ…
အာတီဒုံ ကို ချစ်တယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1148
ရဲစည် says: တိမ်
KZ says: တမီး ကဂျာ ပြခန်းလေး
အေးဆေးနေတာ မကျိချင်ဒေါ့ဝူးရားးးး ကိုဂျီး ရဲစီ။ လားး လားး အကြောင်းတွေ လာမဖွနဲ့နော်။ စန်းစန်းတင့် အစ်ရှူးမို့။ BTW ပြခန်းအတွက် ကဗျာတစ်ပုဒ်ပေးပါ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1317
Crystalline says: တူများဗုတ်ထားတဲ့ကဗျာလေးတွေမဲအများဆုံးဖြစ်နေပါသည်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
KZ says: ပျော်စရာကြီးးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦး ကျောက်ခဲ says: ကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ကိုယ် အတိတ်ကစိတ်အနာရှိလို့ ကဗျာမရေးတော့ပေမည့်…
KZ says: ကျန်း::::::::
ဒါဒွေဂျောင့် ကျောက်ကို ချိ ရဒါ။ ဂယ်ဂျီးကို ရမ်းဂျီးကို ကျေးဇူး ကြီးကြီးတင်ပါ၏။ အဟိဟိ။
ပျော်လိုက်တာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1317
amatmin says: ဟမ်….
ကျေးဇူးတင်နေတယ်လား.. ကျုပ်တို့များ နှစ်ခါပြန်ဖတ်ပီး အပီဗုဒ်လိုက်ရတာ…. ဇဂါးမစပ် ဒီကဗျာပို့စ်ကလူဝင်ဖို့ အော်နေလို့သာ…
ဟိုဘက်ပို့စ်တွေတော့ ဖတ်ရုံဖတ်ရဲတာ ရယ်.. :-D
KZ says: ဟီးးးးး
မနိုင်မှာစိုးလို့ အော်ခေါ်နေရတာ။ ဒီ အချိန် ဘယ်သူမှ ကဗျာမဖတ်ချင်လောက်ဘူးးးး
ကိုယ်တိုင်လည်း ဒေါသမီးသင့်နေတာ။ Was this answer helpful?LikeDislike 12398
KZ says: တဂျား၊ တဂျားးးးး
ဒမာ လာကျိကျိ။ မလာဘူးဆိုတဲ့ သူတွေ လာကြပြီ။
ငိငိငိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 431
စနေ says: အမတော် ဇီဇီ ရဲ့ ကဗျာပြခန်းကို
နောက်ကျသွားတဲ့အတွက် ခွင့်လွှတ်ပါရန် ……ေိေိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
KZ says: တယ်ရီယာ ဒိုဘာမင် စသော ရှိတမျှ ခွေးလွှတ်ပါဒီ နမတော်လေးးးးး ကျေးဇူးကြီးကြီးလည်း တင်ပါကြောင်းးးးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
ကြက်အူလှည့် says: ပြခန်းစောင့် ရီပလိုင်းက မြန်ချက် ကွယ်…။
KZ says: ဒီ ရက်မှာ ဒါပဲ အားထုတ်ရတာကိုးးးး မဗုဒ်လည်း ကော်မန့်မှာ မနိုင်သေးလို့
ကော်မန့်လာပေးထားတာကို ကျေးဇူးပါ။ Was this answer helpful?LikeDislike 8014
ကြက်အူလှည့် says: မိုက်ကယ်ဂျက်ဆငိလို ဒွန့်ပြရင် ဗုတ်မယ်ဗျာ.
KZ says: Just vote it.. Vote it… Was this answer helpful?LikeDislike 1880
ကိုရင်စည်သူ says: လူငယ်တွေ ပါဝင်ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့ ကဗျာပြခန်းထင်ထားတာထက်
KZ says: Thank you so much..!
I think you want to give the watch as present.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1880
ကိုရင်စည်သူ says: အမတော်ဂျီး ကဗျာဗို့စ်သလို့ ရဲရဲကြီး မျက်စိမှိတ်ပီးသာ ၀က်စ်ဒင်းပွဲကို
တိုင်ကပ်နာရီဖြုတ်ပီးး အမတော်ကြီး ပွဲမှာ ၀င်ဗို့စ်ပေးဖို့ အာမခံပါတယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
KZ says: Okie..! Just vote it.. Vote it.. I ‘d like to move it.. Move it… Was this answer helpful?LikeDislike 6551
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ခုချိန်မှာ ..
ကျိုးစားထား …. အဟွတ် .. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
အဟွတ်ဟွတ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3716
လုံမလေးမွန်မွန် says: နော်.. ဗုတ်ပီးဘီ..ချစ်မ…
KZ says: ကျေးဇူးပါ ညီမလေးးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 63
Nay Chi says: ကျမဟာ… ရယ်၊ နှောင်ဖွဲ့မှုရယ်…၊ ဝေဒနာဆွေးချိန်ရယ်ကို Vote ထားကြောင်း ပြောဖို့ကို ခုမှပြောရတယ်..။ :P
ကျမဟာ ကတော့ ကျမဟာမလို့ပေါ့နော်..။ နှောင်ဖွဲ့မှုကတော့ အတွေးလေးကို ကြိုက်လို့ အထူးသဖြင့် ကဗျာကို ဘောင်ခတ်မကြည့်ချင်တဲ့ အတွေးချင်းတူလို့…။ ဝေဒနာဆွေးချိန်ကတော့ စကားလုံးအသုံးနဲ့ ကဗျာနောက်ခံသရုပ်ဖော်ပုံ အချိတ်အဆက်မိနေတာ သဘောကျလို့..။ :P
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: အဟွတ် ….
“ကျမဟာ” ကိုပဲ ကြိုက်တယ် .. အဲ .. ဟုတ်ဘူး .. ဗုတ်လိုက်တယ်လို့ … အိုက်ဒါ .. အိုက်ဒါ … ဂျစ်နွန်းနို့ စစ်ကူလာပေးဒါ ..
KZ says: ဒူ့ကို ချိတာရဲ။
ပို့(စ) ပိုင်ရှင်ကိုရားးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 63
Nay Chi says: တူညားလို ခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်းပြချက်လဲ ပါဝူးးးး
KZ says: ဟွန့်။ နောက်ဆုံး ဗုဒ်ပိတ်ချိန်မှ ပေါ်လာကြသေးတယ်နော်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 63
Nay Chi says: အဟွန့် ဒီပို့စ်မှာလာလာပြီး လေပေါတာ ဒါနဲ့ဆို ၅ခါရှိဘီကို..။ ;)
Mr. MarGa says: ဖြောင်း………….ဖြောင်း…………..ဖြောင်း………….
အနိုင်ရရှိကြောင်း ကြေညာပါအိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12177
အလင်း ဆက် says: ဟင် သဂျုပ်ဇားးး
KZ says: ဒီ ပို့(စ) ကြီး စတစ်ကီဖြုတ်ပေးပါတော့ဗျိုးးးးး
တဂျီး အိပ်ပြီထင်တယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12177
Alinsett @ Maung Thura says: ကျအု ကျအု…